Zahatany Meksika: Mankafy Ny Toerana Mahatalanjona Ao Oaxaca · Global Voices teny Malagasy
Zahatany Meksika: Mankafy Ny Toerana Mahatalanjona Ao Oaxaca
MpanoratraAnthony En Decouverte
Voadika ny 06 Desambra 2016 8:09 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Português, Ελληνικά, Español, polski, Italiano, Français
Monastera taloha, Santiago Apóstol ao Cuilapan de Guerrero. Sary nalain'i © N. Saum, n.saum@yahoo.com.mx
Eo anelanelan'i Mexico ao avaratra andrefana, Acapulco ao andrefana ary Chiapas ao atsinanana no misy ny tanànan'i Oaxaca, tononina hoe « oa-ha-ka ». Be mpitsidika izy noho i Monte Alban, tanàna zapoteka mahatalanjona ao aminy. Raha miserana ao Meksika, misy karazam-piainana tsy nalaina tahaka hitanao ao. Jereo ao amin'ny lahatsoratra manaraka ny topi-maso vitsy misy ny hatsarana sy ny zava-mahatalanjona ao an-tanànan'i Oaxaca.
Nahoana no mitsidika an'i Oaxaca?
Toerana mahaliana tsara andalovana amin'ny zahatany ao Meksika i Oaxaca. 1 500 metatra eo ho eo ny haavo misy azy [miohatra amin'ny ranomasina]. Fantatra ho nipoiran'ny sivilizasiona naharitra an'arivony taona ity tanàna Indiana ity. Mbola voatahiry sy malaza ny fomban-drazana ao. Manankarena tantara, ahitana taratra ny lasany tamin'ny fanjanahantany i Oaxaca mba hisarihana ireo mpitsidika. Hita taratra ao amin'ny foibeny ara-tantara ny vakoka ara-tantarany izay mampiseho tsangambato baraoka marobe sy ahitana ny sisan'ny tanàna mihteky sy zapoteky manodidina azy.
Mitàna toerana lehibe eo amin'ny kolontsain'ny fanjakana ihany koa ny zavakanto. Azo idirana ireo trano fampiratiana zavakanto sy mozea marobe, ary mampiseho ireo sangan'asa fahiny na avy amin'ny kanto ankehitriny. Raha vao tonga ao amin'ity tanàna ity, milomano ao anatin'ny tontolo miavaka ianao. Tahaka ny nijanona ny fotoana. Hiala ny mahazatra ianao. Hahita ny hatsaran'ny toerana. Mba ahafahana mankafy ity tanàna ity sy ny manodidina azy, ity ambany ity ireo toerana sasany tsara ampidirinao ao anatin'ny toerana hovakivakianao.
Miserana ao Meksika hijery ireo zava-mahagaga ao Oaxaca
Manolotra fianjoria mahafinaritra tokoa mandritra ny fitsidihana ao Meksika ny tanànan'i Oaxaca. Manambara aminao ny harena sy ny mahaizy azy ny tanàna ireto toerana manaraka ireto..
Mamakivaky ny foibe ara-tantara
Tanànam-panjanahan-tany manana ny fanintonana Indiana mtsy manam-paharoa ananany i Oaxaca. Amin'ny fitsangantsanganana ao amin'ny foibeny ara-tantara, hahatsikaritra marika sivilizasiona Espaniola maromaro ianao. Misy ireo trano fonenana kolonialy, fiangonana baraoka ary indrindra fa ny “cantera verde”, vato miloko fotsy-maitso mandravaka ireo tranobe maromaro ao an-tanàna. Ao ihany koa ny “zocalo”, faritra miavaka matetika hanaovana lanonambe. Tsara tsidihana ihany koa ny toerana hafa toy ny Palacio del Gobierno sy ny Katedraly.
Meksika – Oaxaca – Katedraly Metropolitana, sary : Rodolfo Garcia Photography – Own work, CC BY-SA 3.0
Tsidiho ny tsena Benito Juarez sy ny 20 de Noviembre
Raha tena te hahita ny kolontsaina isam-paritra ianao, dia tsara ny mandeha eny an-tsena ao an-tanàna. Raha mandalo ao amin'ny tsenan'i Juarez ianao, hahita ny asa tanana ao an-toerana, anisan'izany ny karipetra, ny vazy tanimanga, ponchos (akanjo mafana ambony), sarivongana biby sy entana fahatsiarovana isan-karazany. Rehefa avy manavatsava ny tranohevan'ny entana fahatsiarovana, dia mankanesa indray ao amin'ny tsenan'ny 20 novambra. Afaka manandrana ireo zavatra mampiavaka ny ao an-toerana ianao, toy ny tlayudas izay tortillas (krepy) lehibe feno tsaramaso, akoho malemy izay sakafo nentim-paharazana ahitana zava-manitra sy kakaô, ny tejate izay zava-pisotro vita amin'ny kakaô sy katsaka. Raha mbola te-hijery tsena hafa, miandry anao ny Mercado de Abastos
Meksika – Oaxaca – Mercado 20 de Noviembre
sary : MaloMalverde
Ao amin'ny Cité de Monte Alban ny fotoana
Ny tanànan'i Monte Alban dia tanàna Zapoteka fahiny. Ao an-tampon-kavoanan'i Jaguar, manana haavo 2000 metatra no misy azy. Hanolotra tazana mahatalanjona ao amin'ny lohasaha sy ao amin'ny tendrombohitra manodidina ny fitsidihana kely ao amin'ity toerana arkeolojika ity. Afaka mankao 30 minitra miala ny tanàn-dehibe ianao. Ahitana trano isan-karazany izay toerana fanaovana fombafomba ity toerana ity. Misy ihany koa ny tranom-bakoka, izay ahitanao angon'ny zavatra fahiny.
Raha mbola manam-potoana hijerena ity tanàna mahafinaritra ianao, afaka mitsidika ny lohasaha Tlacolula ao atsinanan'i Oaxaca ihany koa.